Inqubomgomo Yobumfihlo Discover ➡ Discover Online Online ➡️
1 Inqubomgomo yobumfihlo
1.1 Ukuthumela nokuqopha imininingwane ejwayelekile
2 Ukunemba nemininingwane yeqiniso
3 Ukusetshenziswa kwamalungelo okufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukwesulwa noma ukuphikiswa
4 Ukwemukelwa kanye nemvume
5 Izinguquko kule nqubomgomo yobumfihlo
6 Imeyili yezentengiso
Ukuthumela idatha yomuntu siqu kule webhusayithi kuyimpoqo ukuxhumana, ukuphawula, ukubhalisela i-Discover.online blog, ukwenza isivumelwano nezinsizakalo eziboniswa kule webhusayithi futhi uthenge izincwadi ngefomethi yedijithali.
Discover.online izoqoqa idatha yomuntu siqu yabasebenzisi, ngamafomu online, nge-Intanethi. Imininingwane yomuntu eqoqiwe, ngokuya ngecala ngalinye kungaba, phakathi kwabanye: igama, isibongo, i-imeyili kanye nokuxhumeka kokufinyelela. Futhi, esimweni sezinsizakalo zesivumelwano, ukuthenga izincwadi nokukhangisa, ngizocela umsebenzisi imininingwane ethile yasebhange noma yokukhokha.
Amasistimu wemininingwane yokuthwebula yomuntu siqu atholakala.online :
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini yezinsizakalo ezihlinzekwa ngokuthola.ixhumanisa ku-Newsletter efanayo.
I-Discover.online futhi ifunda okuncamelayo kwabasebenzisi bayo, izici zabo zokuphila kwabantu, amaphethini abo omgwaqo, nolunye ulwazi ndawonye ukuze baqonde kangcono ukuthi ngubani owakha ababukeli bethu nokuthi yini abayidingayo. Ukulandelela okuthandwa ngabasebenzisi bethu kusisiza ukuthi sikukhombise izikhangiso ezifanele kakhulu.
Umsebenzisi futhi, ngokujwayelekile, noma yimuphi umuntu wemvelo noma osemthethweni, angaqala i-hyperlink noma ithuluzi lokuxhumanisa lobuchwepheshe (ngokwesibonelo, izixhumanisi noma izinkinobho) kusuka kwiwebhusayithi yakhe ukuthola i-Discover.online (i- "Hyperlink"). Ukusungulwa kwe-Hyperlink akusho ukuthi kunoma yikuphi ukwenzeka kobudlelwano phakathi kwe-Discover.online kanye nomnikazi wesayithi noma ikhasi le-web lapho i-Hyperlink isungulwe khona, noma ukwamukelwa noma ukwamukelwa ngukuthi kutholwe.online nezinsizakalo Kunoma ikuphi, i-Discover.online igcina ilungelo lokunqabela noma ukukhubaza noma yisiphi isixhumanisi kuWebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi.
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini nezinsizakalo ezinikezwe ukutholwa.online i-Newsletter efanayo.
Umsebenzisi uqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu enikezwe ngamafomu ahlukile iyiqiniso, lapho enesibopho sokuxhumana nganoma yikuphi ukuguqulwa kwawo. Ngokufanayo, uMsebenzisi uqinisekisa ukuthi yonke imininingwane enikeziwe ifana nesimo sakhe sangempela, esivuselelwa futhi sinembile. Ngaphezu kwalokho, uMsebenzisi ubophekile ukugcina idatha yakhe ivuselelwa ngaso sonke isikhathi, ephethwe kuphela ngokungafanele noma imininingwane eqanjiwe yedatha enikeziwe kanye nomonakalo ongabangelwa yi-Online Services Telemáticos SL njengomnikazi we-web Discover.online.
Ungaqondisa ukuxhumana kwakho futhi usebenzise amalungelo finyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhanselwa nokuphikiswa ngeposi yeposi kuC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (Granada) noma i-imeyili: info (at) Discover.online kanye nobufakazi obuvumayo emthethweni, njengefotokopi le-ID noma elifanayo, libonisa ngesihloko esithi "DATA PROTECTION".
Umsebenzisi uthi wazisiwe ngemibandela yokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, ukwamukela nokuvuma ukwelashwa kwayo nge-Online Servicios Telemáticos SL ngendlela nangezinjongo eziboniswe ku isaziso somthetho.
Ngokuya nge-LSSICE, i-Online Servicios Telemáticos SL ayenzi imikhuba ye-SPAM, ngakho-ke ayithumeli ama-imeyili ezentengiso angakaze acelwe ngaphambilini noma agunyazwe nguMsebenzisi, kwezinye izikhathi, angathumela ukukhushulwa kwawo kanye nokunikezwa okuthile futhi izinkampani zangaphandle, ezimweni kuphela lapho unegunya labamukeli. Ngenxa yalokho, kufomu ngalinye elinikezwe kwiWebhusayithi, uMsebenzisi unethuba lokunikeza imvume yakhe yokuthola "Incwajana" yami, kungakhathalekile imininingwane yezentengiso ecelwe ngqo. Ungakhansela futhi okubhalisile ngokuzenzakalela kuma-Newsletter afanayo.